महिलाको लागि गर्भधारणको उचित समय कुन ? - सुनाखरी न्युज
महिलाको लागि गर्भधारणको उचित समय कुन ?
Posted on: June 4, 2021 - 1:41 pm
प्रजनन क्षमताका लागि उमेरको कुरा गर्ने हो भने यसमा महिला र पुरुषमा भिन्न भिन्नै प्रभाव हुनेगर्छ । धेरैजसो महिलालाई आफ्नो प्रजनन क्षमता सम्बन्धी अधिक जानकारी हुँदैन । महिलाको जन्म निश्चित अन्डको संख्यासँग हुन्छ, जुन उमेर बढ्दै जाँदा कम हुँदै जान्छ । एउटा उमेर चरणमा पुगिसकेपछि उक्त अण्ड सकिन्छ । र, त्यसपछि उक्त अन्ड बन्ने प्रक्रिया नै रोकिन्छ । जबकि पुरुषको शरीरमा विर्य बन्ने क्रम जीवनभर कायम रहन्छ । यस हिसाबले के भन्न सकिन्छ भने महिलाको हकमा गर्भधारण गर्नका लागि एक सीमित उमेर हुन्छ । जबकि पुरुष ६०–७० वर्षको उमेरमा पनि पिता बन्न सक्छन् ।
महिलाको अण्डमा आनुवांशिक असामान्य हुने संभावना कम हुन्छ । त्यसैले यस उमेरमा कुनैपनि आनुवंशिक डिसअर्डर, जस्तो कि डाउन्स सिन्ड्रोम, थैलेसिमिया जस्तो बच्चा जन्माउने जोखिम कम हुन्छ । गर्भपातको खतरा केवल १० प्रतिशत हुन्छ ।
३५ बर्षपछि गर्भधारण गर्ने संभावना स्वभाविक रुपले कम हुन्छ । यस उमेरमा जुम्ल्यहा बच्चा जन्माउने संभावना धेरै रहन्छ । यस उमेरमा गर्भधारण गर्दा बच्चामा आनुवंशिक समस्या हुने संभावना बढी हुन्छ । गर्भपतन हुने खतरा पनि रहन्छ ।